William Butler Yeats. Makore zana nemakumi matatu nematatu emunyori mukuru weIrish. 153 poems | Zvazvino Zvinyorwa
William Butler Yeats ndomumwe wevanonyanya kudetemba ve Ireland uye nhasi ndeake mazuva ekuzvarwa. Aive zvakare mutambi wemitambo uye mumwe weanomiririra manhamba eiyo yekuIrish kunyorwa patsva. Aivewo mune zvematongerwo enyika uye aishanda seneta. Muna 1923 akagamuchira iyo Mubayiro weNobel muMabhuku. Enda 4 yenhetembo dzake dzekupemberera gore rake.
2.1 Paunenge wakura
2.2 Ndiani akarota kuti runako runopfuura sehope?
2.3 Anorangarira runako rwakanganwika
2.4 Kutanga rudo
2.5 Ipa mudiwa wako mavhesi mashoma
2.6 Waini inopinda mumuromo
Akazvarirwa mukati Dublin, paakaverenga hurukuro yake yekugamuchirwa kwaNobel kuRoyal Swedish Academy Yeats akazivisa kuti akadaro mureza werudzi rweIrish uye kuzvimirira kwemaIrish. Uye ndeyekuti iyo isinganzwisisike halo yakakomberedza munyori uyu yaive nezvakawanda zvekuita nekufarira kwake uye nekurumbidza kwakaita iyo epic uye celtic ngano yenyika yavo.
Muchokwadi aive nehukama neiyo esotericism yenguva yacho uye aive chikamu cheakavanzika odhi The Golden Dawn, kunyange akazoisiya. Yakavambwa iyo Abbey Theater and the Irish National Theater, iyo yaakatungamira muhupenyu hwake hwese, yakafuridzirwa netsika dzevaCelt uye ngano dzekare dzevanhu.
motokari 6 yenhetembo dzake kumurangarira kana kumuisa kune vasina kudzidza mubasa rake. Paunenge wakura, Ndiani akarota kuti runako runopfuura sehope?, Anorangarira runako rwakanganwika Kutanga rudo, Ipa mudiwa wako mavhesi mashoma y Waini inopinda mumuromo.
Paunenge wakwegura uye wachena uye wakaneta
uye kugutsurira nemoto tora bhuku iri,
uye kuverenga zvishoma nezvishoma, uchirota zvinyoro nyoro
ayo maziso ako akambove nawo, nemimvuri yawo yakadzika;
vangani vanonamata nguva dzako dzenyasha dzinofara,
uye ivo vakada runako rwako nerudo rwekunyepa kana rwechokwadi;
asi murume akada mweya wepilgrim mauri,
uye akada kusuwa kwekuchinja kwechiso chako.
Uye kusendamira panopenya matanda,
iwe kugunun'una, kusuruvara zvishoma, kutiza kwakaita rudo,
mafambiro aiyangarara kure pamusoro pemakomo,
Akavanza chiso chake pakati penyeredzi zhinji.
Ndiani akarota kuti runako runopfuura sehope?
Kune iyi miromo mitsvuku, nekudada kwavo kwese kuneta,
zvinosuwisa kare, zvekuti hazvishamise kuti vanogona kufanotaura,
Troy akatisiya nemufaro uye nechisimba flash,
uye vanakomana vaUsna vatisiya.
Isu tinoratidzira, uye nyika yakabatikana inomira pamwe nesu
Pakati pemweya yevarume, vanoti zvakanaka uye vorega nzvimbo yavo
semvura yakachenuruka mumakwikwi avo echando;
Pasi penyeredzi dzinopfuura, furo rematenga,
ramba uchirarama ichi chakasurukirwa kumeso.
Kotama pasi, ngirozi huru, munzvimbo yako yekugara yakasviba:
Usati wavapo uye usati warova chero moyo,
akashandurwa uye ane mutsa iye akamira pachigaro chake cheushe
Runako rwakaita kuti nyika ive nzira yehuswa
kuitira kuti Aise tsoka dzake dzinodzungaira.
Anorangarira runako rwakanganwika
Nokukukomberedza mumaoko angu,
Ndinobata pamoyo wangu runako irworwo
kuenda kure nenyika.
gadza korona dzakakandwa nemadzimambo
Mumatsime emweya, anotiza mauto;
nyaya dzerudo dzakarukwa neshinda shinda
nevakadzi vanorota, mumachira
iyo yairera chipfukuto chinouraya:
marosi enguva dzakarasika,
kuti madzimai akarukwa nevhudzi ravo;
maruva anotonhora emvura akatakurwa nevasikana
kuburikidza nekwakasviba makoridho anoyera,
pakamuka mhute yezvinonhuwira
uye izvo chete Mwari vakafunga:
kubva pachifuva chakachenuruka, ruoko rwakanonoka,
vanouya kwatiri vachibva kune dzimwe nyika vachiremerwa nehope.
Uye paunogomera pakati pekutsvoda
Ndinonzwa Runako ruchena rwuchigomerawo
yeiyo nguva apo zvese
rinofanira kudyiwa sedova.
Asi murazvo pamusoro pomurazvo uye mugomba rakadzikadzika pamusoro pegomba rakadzika,
uye chigaro cheushe pachigaro uye nehafu muzviroto,
vanoisa minondo yavo pamabvi avo esimbi,
zvinosuruvarisa ivo kufungira pamusoro pezvakavanzika zvakanyanya zvega.
Kunyangwe yaive yakarerwa, semwedzi unodzungaira,
yemucheche anouraya weiye akanaka,
akafamba zvishoma, akatsvuka zvishoma,
ndokumira munzira yangu,
kusvikira ndazofunga muviri wake
yaive nemoyo mupenyu, wemunhu.
Asi kubva ruoko rwangu rwaibata
ndokuwana moyo wedombo.
Ndakaedza zvinhu zvakawanda
uye hapana chimwe chazvo chakashanda,
sezvo iye ava kupenga
ruoko runofamba pamwedzi.
Akanyemwerera uye akandishandura,
Ndakava asina mano
kutaura ndoga, kutaura ndoga,
nepfungwa dzisina kukwana
kuti denderedzwa redenga renyeredzi
Kana mwedzi uchidzungaira
Ipa mudiwa wako mavhesi mashoma
Sunga bvudzi rako negoridhe rebvudzi,
uye utore zviya zvekugara zviya.
Ini ndakabvunza moyo wangu kuti ndigadzire aya marombe mavhesi:
aishanda padziri zuva nezuva
chivakwa cherunako runosuruvarisa
nezvakasara zvehondo kubva kune dzimwe nguva.
Nokusimudza parera paruoko rwako,
putira bvudzi rako refu uye gomera,
moyo yevarume inorova nekupisa;
uye furo kunge kenduru pane jecha risina kujeka
uye nyeredzi dzinosimudza denga nedova,
ivo vanongoraramira kuvhenekera tsoka dzako dzinopfuura.
Waini inopinda mumuromo
Uye rudo runopinda mumaziso;
Izvi ndizvo zvese zvatinoziva chaizvo
Asati achembera uye kufa.
Aya ndiwo maitiro andinounza girazi kumuromo wangu,
Uye ndinotarisa kwauri, uye ndinogomera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » William Butler Yeats. Makore zana nemakumi matatu nematatu emunyori mukuru weIrish. 153 nhetembo
Miguel de Urbion akadaro
Rudo runopinda mukati
nemasaisai anonzi manzwiro
Kune meso asingaoni uye asingatsauswi
kana rudo ruchiuya runotapira nemhepo.
Pindura kuna Miguel de Urbión